Waa maxay Cloud Computing.. – Fatuux Tech
Waa maxay Cloud Computing..
Fatuux Cade	Tech News	 February 27, 2019 February 26, 2019 1 Minute
Cloud Computing waxaa lagu qeexi karaa, xog dhaxtaal ah dadka isticmaalayana ay markasto heli karaan. Cloud Computing waa awoodaha computerka qaasatan keedinta oo internetka taalo si loo helo xog aanan lumin, loo yareeyo ku tiirsanaanta computeradda ayagoo halaabi karaan, si loo wadaago xogtaas ayadoo u baahneyn in markasta ay ak taalo qofka isticmaalayo.
Cloud Computing waxuu ka saacidayaa in aanan computer ka caadiga ah lagu keedin xog waaweyn uusan qaadi Karin ama tabarteeda uusan laheyn sidaa darteeda ayaa internet ka loo dhigay. Waxaana lagu tilmaamaa waa wax kasta oo yaala internet ka laguna keediyay haddey noqoto cayaar u baahan in lagu cayaaro internet ka, maktabad online ah iwm.
adeegyada uu bixiyo ayaa kala ah; Infrastructure As-A-Service IAAS, Platform As-A-Service PAAS iyo Software As-A-Service SAAS.
Waxuu u kala baxaa 2 a) Public Cloud Computing iyo b) Private Cloud Computing. Public ga waxuu u banaan yahay dhamaan dadkoo idil waana mid la ogol yahay in lagalo sida Amazon website keeda iyo adeegyadeeda, Private kana waa mid u gooni ah shirkad, dad iwm oo qaas u ah adeegyadaas. Waxaa Jiro Hybrid Cloud Computing asagana waxuu isku keenayaa A iyo B.
Adeegyada uu bixiyo Cloud Computing.
A) IAAS: waxuu bixiyaa awoodaha loo baahan yahay in computer xoog leh lagu sameyo sida in lagu soo kiciyo Software yo xoog leh ama loo isticmaalo VM(Virtual Machine) iyo APIs.
B) PAAS: waxuu sidoo kale xooga saaraa in in lagu hormariyo software laguna dhiso kadib markii la dhisana looga soo galo halkaas asagoon yaaleynin computer shaqsi leeyahay.
C)SAAS: badanaa waxaa loo isticmaalaa Application Services ka in lagu soo galo qalab walbo oo internet la xariiri kara sida mobile, laptop iwm.
Waad ku mahadsan tahay aqrintaada walaal. wixii fikrad ah fadlan comment ga igu dhaaf.
Published by Fatuux Cade
founder of FatuxTech.wordpress.com.	View all posts by Fatuux Cade
Previous Post Maxey ku kala duwan yihiin Android iyo iOS??
Next Post Sidee ku dooran kartaa Computer fiican!!